Ezigbo nri na agụụ na-agụkarị
Ahụ ike ụmụ nwanyị Nri oriri kwesịrị ekwesị
Ụzọ kachasị mfe iji mepụta mmetụta nke satty bụ ngwaahịa osisi. Ha na-agbapụta n'ime afọ, na-ejuputa ya, ma si otú ahụ gbochie ịṅụbiga mmanya ókè. Mmetụta ahụ ga-esiwanye ike ma ọ bụrụ na mmiri na-asacha ya dị ka o kwere mee.
Kwa afọ, ndị ọkà mmụta sayensị na-emeghe ọtụtụ osisi ndị ọzọ ga-enyere anyị aka n'ịlụ ọgụ megide ibu arọ, enyemaka maka iduzi nri kwesịrị ekwesị na agụụ na-agụ mgbe nile nwere ike imeri. Dịka ọmụmaatụ, osisi konjak si n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere ihe nke ịmịkọrọ mmiri mmiri 100 dị arọ ya, ebe ọ na-ebelata mmetụta nke agụụ na ime dị ka ihe dị nwayọọ. Na guar gum site na ihe ọṅụṅụ nke Indian acacia na-ebelata ọchịchọ iri ihe ụtọ. Ma echefula agadi, ndị na-enyere aka na-adị arọ - dịka apụl ma ọ bụ lemon. Ihe oriri akwukwo nri nke di na ha, kwa, nwere ihe siri ike na-ekpochapu onwe ya, nke na-eme ka nchekorita di ogologo. Na ihe oriri dị elu na protein (dịka ọmụmaatụ, mkpo ọkụkọ ma ọ bụ ọkụkọ) ga-enyere aka dozie agụụ.
Enwere ụzọ abụọ dị mfe iji dozie nsogbu nke nri kwesịrị ekwesị na agụụ na-agụ mgbe niile: ma jupụta afọ, ma ọ bụ, site na-emetụta usoro nchebe nke etiti, na-enye ụbụrụ ụbụrụ banyere ụfụ. Agụụ ahụ anyị na-agụ na-achịkwa agụụ na-agụ anyị (a na-akpọ ya "hormone nke obi ụtọ"). Ndị ọkà mmụta sayensị ekpebisiwo ike na ụfọdụ osisi nwere ike imetụta hormone ahụ, na-enweghị mmerụ ahụ. N'oge na-adịbeghị anya, a chọtawo ihe ndị dị otú ahụ na saffron. O wee pụta na na mgbakọ ya na griffonium ọ na-enwe ike ịmepụta mmepụta nke serotonin, zinc na vitamin B, iji kwalite mmụba nke ọma n'ahụ ha, si otú ahụ gbochie ịṅụbiga mmanya ókè.
Ọchịchọ na-achọsi ike iri ihe (ọ bụrụ na, n'ezie, ọ bụghị glycemia - ọbara glucose dị ala) akọwaghị ya n'ọtụtụ ihe kpatara nsogbu nsogbu uche. N'ọnọdụ ndị dị otú a, m na-ebu ụzọ mepụta ụdị na ogo nke nchekasị uche, na, dabere na nsonaazụ, ana m akwado ihe mgbakwunye ihe oriri kwesịrị ekwesị. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọrịa ahụ na-adọrọ adọrọ na-atọ ụtọ, ana m enye ndụmọdụ chrome. Ọ bụrụ na ọchịchọ iri nri adịghị agabiga ọbụna mgbe i risịrị nri, edepụtara m ihe dịpụrụ adịpụ nke hoodia. Ọ bụrụ na ihe kpatara ịṅụbiga mmanya ókè bụ nrụgide, gbakwunye na ntinye nke protein ndị na-aṅụ ara ga-enyere aka. Ngwaahịa ụwa niile nke na-enyere aka mee ka agụụ na-agụ agụụ ma belata agụụ bụ tii tii na kelp, na (dị ka oge a na-eme) - ahịhịa na-eme ka nje nje na nje bacteria lactic acid.
Ndị isi atọ na-eri nri kwesịrị ekwesị na agụụ na-agụkarị ndị na-egbochi anụ ahụ (gbochie ya) - apụl, carrots na tofu.
Ihe ndozi ndị America?
Ndị ọkà mmụta sayensị America achọpụtala na onye nleta ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke na-ahọrọ isi "nri" (ahụike, ahụ ike, nri, obere kalori), dịka iwu, nyere iwu ka ndị ọzọ na-eji ejiji na ihe oriri. Ha nwekwara calorie 131% karịa nri isi.
Nnu dị ịtụnanya a na-esi ísì ụtọ nke mmanya na-acha ọbara ọbara site na Marguerite de Turenne na-ejikọta àgwà sel nnu nke si n'àgwàetiti Re (France) na mmanya si na Bordeaux. Ọ dị mma maka anụ na salads. Nakwa, nnu dị na ndepụta nke mmanya ọcha - maka azụ na àkwá. Ezi agụụ!
Sushi na chocolate
Ị chere na ọ bụ naanị ezigbo sushi? Nke a bụ ezigbo ihe ịtụnanya - sushi si chocolate, papaya, mango na osikapa osikapa. N'ezie, ha nwere caloric karịa ndị sushi nkịtị, mana uto ha dị nnọọ iche. Nye ndị hụrụ sushi, nke a bụ onyinye kacha mma.
Ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ
O yiri ka ọ ga-ezuru onwe gị iji rie nri ma debanye aha na mgbatị ahụ, na n'oge okpomọkụ, anyị ga-aṅụrị ọṅụ na nlele gị mara mma ma dị nro na enyo. Kama iji mezuo - ọ gaghị ezu iji debe onwe anyị "n'ime ahụ ojii". Ihe kpatara ya abughi ihe na-abaghị uru nke mgbalị, dị ka na-egbu egbu ahụ anyị na toxins, ndị nchebe na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ bụ ndị gbara anyị gburugburu na ndụ kwa ụbọchị. A na-edebe ha n'akụkụ dị iche iche nke ahụ (karịsịa gburugburu gburugburu na apata ụkwụ), na-egbusi usoro mmezi ahụ. Na njedebe, ihe ndị dị egwu na mkpụrụ ndụ anụ ahụ na - eduga ná nkwụsị nkwụsị - ngwongwo abụba dara adaba nke na - adịghị adaba n'ụdị nri ma ọ bụ mmega ahụ. Ma ọbụna ụdọ na-ebelata ọgụ, mee ka ntutu dị nro ma dị njọ, na agba akpụkpọ - adịghị mma. Ya mere, isi ihe dị n'usoro ihe omume nke iweghachi ahụ gị ka ọ bụrụ ihe oriri kwesịrị ekwesị na agụụ na-agụkarị kwesịrị ịbụ ịmechasị ahụ nke emerụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ihe mgbagwoju anya "4.3.2.1 Ọgwụ arọ na nkwụsịsị" (na capsules ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ) na-egbochi ma ọ bụ na-ewepụ ihe toxins si n'ahụ ya, n'ihi ọganihu ọhụrụ nke sayensị nke ụlọ ọrụ France nke Arkofarma. Njikọ nke sayensị abụọ - phytology na chronobiology - na - enye ohere ka ihe ọkụkụ na - arụsi ọrụ ike (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii, ọka bali, melissa na ndị ọzọ) na - emetụta ozu ahụ kpọmkwem mgbe ha kachasị mkpa ma dị irè. N'ihi nke a, a na-eme ka akụkụ ahụ na ọbara dị ọcha site na toxins, akpụkpọ ahụ na-enweta agba ahụ dị mma, ma kachasị mkpa - ọnụ ọgụgụ ahụ ga-amasị ezigbo arọ maka ogologo oge.
Mmiri beetroot megide cholesterol
Ndị na-eme nchọpụta na Ụlọ Akwụkwọ Ọgwụ na London kwubiri na ọ bụrụ na ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ 500 gri ihe ọṅụṅụ kwa ụbọchị, ị nwere ike belata ọkwa cholesterol n'ọbara gị (ọ na-ebelata awa 3 mgbe ọ nwụsịrị ihe ọṅụṅụ ahụ, nke a na-adịgide ruo awa 24).
Ihe oriri na-emeri ọnụ ọgụgụ ahụ
Adyghe cheese uru
Bitter chocolate: appetizing na bara uru!
Kedu uru bara apricots na prunes bara uru
Kedu ihe oriri ndị dị ize ndụ na ahụ ike?
Kedu ka obere chocolate si emetụta ahụ mmadụ?
Njirimara bara uru nke akwukwo
Ihe bat na soda
Kedu ka mmanya na ise siga si emetụta ime ime?
Ụka pancake mara mma na osisi poppy
Ihe arịa kichin kwesịrị onye ọ bụla nwe kichin nwere na kichin
Na nchịkọta ụdị: nchịkọta nchịkọta ọhụrụ nke Nolte Küchen
Akwukwo nri puree na India
Otu esi adọta uche nwoke - Gemini
Echefughị ​​ịhụnanya mbụ
Dijon salad na onyinye
Otu esi ezute afọ ọhụrụ
Eji mmanu ose oji
Griza maka ntutu isi
Iwu nke nlekọta maka ọla
Ọkụ nke agụụ: uwe agbamakwụkwọ uhie
Omelette esiri ya na oven
Nchịkọta anụcha nke pancakes